Home Wararka MW Farmaajo marabo RW musharax ah doorashana maku galaayo hadaan Gedo maamuleynin
MW Farmaajo marabo RW musharax ah doorashana maku galaayo hadaan Gedo maamuleynin
Madaxweyne Farmaajo oo waqtigiisa maalmo un u harsan yihiin ayaa dalka qalqal siyaasadeed & mid amni u galinaayo danihiisa shaqsiyaga , horay ayeey aheyd markii Raisal Wasaare Hassan ALi Khaire xilka looga tuuray maxaa musharax unoqotay , asagoo horay daacad ugu ahaa Farmajo balse sababsaday hamigiisa siyaasadeed.
Maanta xaaladaan jahwareerka waxaa usabab ah Madaxweyne Farmaajo oo ku andacoonayo G/Gedo beesheeda dagan dhamaan kuraasta kasoo baxeeysana aniga qoondeenayo .
Maamulka Jubaland ayaa iyana taagan Kuraasta xildhibaanada Gedo taalo waxaa lo maamulaya si cadaalad ah muwaadiniinta reer gedo udhaxeeysa macquul ma ahan in koox gaar ah loo qabto.
Haddaba Iswaalka & xaalad abuurka Madaxweyne Farmaajo waxaa laga dhadhansanayaa in uu yahay shaqsi damaciisa ka tan badiyay .
Hadal caan baxay ee laga haayo Madaxweyne Farmaajo ayaa ah Xudunteeda ku duugan xamar , & maxaa iga gidhiish ah hadii xamar burburto , muwaadin adiga lee is qabadsii